Submitted by everlearner on Sat, 01/09/2016 - 07:52
Just want to share "3 Takeaways" from my year 2015 experiences.
Read more about Three Takeaways from 2015
Submitted by everlearner on Sat, 06/06/2015 - 08:34
DECIDE ဖြင့် ဘဝမှာ နေထိုင်ခြင်း
အိုက်ဆင်ဟောင်ဝါ ဆုံးဖြတ်နည်း ထဲက အကွက် - ၂ (DECIDE - အရေးကြီးပြီး ပုံမှန် လုပ်သွားနိုင်ရင် အကျိုးများတဲ့ အရာတွေ) (Eisenhower Matrix) (http://fb.co/917290988333237) အကြောင်းကို လက်တွေ့ နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြန်ရေးထားတာလေးပါ။
ဒီနေ့ ဆယ်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းတွေ ထွက်လာတော့ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းတက်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကို ပြန်သတိရတယ်။ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တာရယ်၊ နောက်တစ်ခါ ပြန်မရနိုင်တဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဆိုတာရယ်ကို လက်ခံပြီး နှစ်စ ကတဲက ပုံမှန် ကြိုးစားခဲ့တယ်။
Read more about Living in DECIDE - Second Grid of Eisenhower Matrix
Submitted by everlearner on Sun, 05/31/2015 - 06:04
အလုပ်လုပ်ရင် မဖြစ်မနေ ပြောရ ဆိုရတာက ကိုယ်ရသင့်တဲ့ လုပ်အားခ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ "ငွေကြေး" စကား တွေပါ။ လူတော်တော် များများက ငွေအကြောင်း ပြောရမှာ ရှက်တတ် ကြတယ်။ ငွေအကြောင်း ပြောရင် ငွေမက်တဲ့သူလို့ အထင်ခံရမှာ စိုးတာမျိုး ဖြစ်နေတတ်တာ သတိထားမိပါတယ်။
Read more about အလုပ် နဲ့ ငွေ
Submitted by everlearner on Sun, 01/25/2015 - 05:40
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ လူတစ်ယောက် အတွက် နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ မဖြစ်မနေ ရရှိနေဖို့ လိုအပ်တာက ကုသိုလ်၊ ပညာ နဲ့ ဥစ္စာပါ။
ကုသိုလ် ရအောင် လုပ်ရမယ့် အပိုင်းက ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရမယ့် အပိုင်းပါ၊ အလကား နေရင်း ရမယ့် ကုသိုလ်ကို နေ့စဉ် မနက် အိပ်ယာထ၊ ညအိပ်ယာဝင်၊ အချိန်တိုင်း သတိရရင် ရသလို ကုသိုလ် ရယူနိုင်အောင် ကြိုးစားတာ အရမ်းကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ပါ။
Read more about ကုသိုလ် ပညာ ဥစ္စာ ရဖို့
Submitted by mmshare on Wed, 09/03/2014 - 12:30
ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ရှိ အလုပ်က ပြောင်းချင်နေတာမျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲလို ဖြစ်နေရင် စနစ်တကျ အောင်အောင်မြင်မြင် ပြောင်းနိုင် စေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေက အသုံးကျမယ် မျှော်လင့် ပါတယ်...
Read more about အလုပ်ပြောင်းလိုသူများ အတွက် အရေးကြီး အချက် ၃ ချက်
Submitted by everlearner on Sun, 11/24/2013 - 05:25
အောင်မြင်ခြင်း ဆိုတာ အလကားရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပေးအယူ လုပ်လို့လည်း မရပါဘူး။ လူတစ်ယောက် အောင်မြင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို နောက်ထပ် လူတွေ လိုက်လုပ်တိုင်းလည်း အောင်မြင်ဖို့ ရာနှုံးပြည့် မသေချာပါဘူး။ သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အားထုတ် ကြိုးစားမှုတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
လုပ်စရာ တစ်ခုခုရှိလာတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်မှာ ရှိသမျှ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ ကာယအား ဉာဏအားတွေကို အစွမ်းကို အသုံးချပြီး အမှန်ကန်ဆုံး ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ ထိုက်တန်တဲ့ ရလာဒ်ကောင်းတစ်ခု သေချာပေါက် ရလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ အကောင်းဆုံး အမှန်ကန်ဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။
Read more about အောင်မြင်ခြင်း သီအိုရီများ - အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း(၈)
Submitted by everlearner on Sun, 11/03/2013 - 13:24
If you always want to learn high quality courses from best classes from the best professors and universities, like Harvard and MIT, EdX is for you.
Read more about New Way to Learn Best Quality Courses from Harvard & MIT for Free - EdX
Submitted by everlearner on Sat, 09/14/2013 - 04:43
How many tech, internet startup in Yangon are founded as "Remote Team"?
The main idea is to overcome the following major problems.
- Super expensive office rental fee forastartup.
- Lack of enough Electricity
- Slow and Expensive internet lines
- Daily travelling hours between office and home which isanightmare for both men and ladies.
Read more about A Remote Team foraTech Startup in Myanmar
ဝန်ထမ်း အခွင့်အရေးနဲ့ Google က ရတဲ့ သင်ခန်းစာ
Submitted by everlearner on Thu, 03/28/2013 - 07:45
သင်ဟာ လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဆိုရင် ပထမဆုံး ဂရုစိုက်ရမှာက သင်နဲ့ အနီးဆုံးသူတွေ ဖြစ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဝန်ထမ်းတွေပါပဲ။
သင်နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး ဝန်ထမ်းတွေကို ဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ဝန်ထမ်းတွေကလည်း သူတို့နဲ့ အနီးကပ်ဆုံး ဆက်ဆံနေရတဲ့ စားသုံးသူ (Customers) တွေကို ဂရုစိုက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါ သင့်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး နံပါတ်တစ် လုပ်ရမယ့် အလုပ်ပါ။
အကြောင်းကတော့ ဒီလို ကျွမ်းကျင်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ မရှိဘဲ သင်ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့ မရတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Read more about ဝန်ထမ်း အခွင့်အရေးနဲ့ Google က ရတဲ့ သင်ခန်းစာ
Easy Ways To Improve Your Design Skills
Submitted by Phyu on Tue, 03/26/2013 - 15:11
Here are some tips to increase your web designing skills.
1. Browsing & Collecting
Let's browse design portfolios every day and learn design elements, colour inspiration, typology and the latest trends in web design. You may find awesome design creation and thinking from experienced designers all over the world.
Start to collect inspirational stuff that can use in your design if you need. Then try to make your own project with sketch on paper before going to the computer.
Read more about Easy Ways To Improve Your Design Skills